Shwe Yoe – Page 447 – Daily Special News
ဆယ်တန်းအောင်တဲ့ အထိမ်းအမှတ် အနေနဲ့ လမ်းထဲမှာ စတုဒိသာကျွေးမည့် မေသက်ထားဆွေ
By Shwe Yoe PPosted on June 14, 2019
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကို အောင်မြင်စွာ ဖြတ်ကျော်နိုင်ဖို့ဆိုတာ ကံတရားအထောက်အပံ့တွေလိုအပ်သလို နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့ အချိန် ယူလေ့လာ ကြိုးစားဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ မေသက်ထားဆွေက တော့ တက်္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲကို မြန်မာစာ၊ ဇီဝဗေဒဘာသာ ရပ်တွေမှာ ဂုဏ်ထူးတွေနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ မေသက်ထား ဆွေအနေနဲ့ အနုပညာပိုင်းမှာရော၊ […]
စွန့်ပစ်ခံနှစ်ပေါင်း ၁၀၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ သီပေါဘုရင်၏ စတုတ္ထသမီးတော်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ အိမ်တော်
ရာဇဝင်ထဲမှာထားခဲ့ကြတော့မှာလား???၁၉၁၅ခုနှစ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း၁၀၄နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့သီပေါ ဘုရင်ရဲ့ စတုတ္ထသမီးတော်နေထိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်တော်ပါအထကကျောင်းခွဲတခုအနေနဲ့တည်ရှိနေပြီး ပြင်ဆင်မွန်းမံမှုမရှ်ိ တန်ဖိုးမသိသူများလက်ထဲမှာတန်ဖိုးမရှ်ိဖြစ်နေတဲ့ နန်းကျဘုရင်တပါးရဲ့လက်ကျန်အမွေအနှစ်တခုကိုရာဇဝင်ထဲမှာဘဲထားခဲ့ကြတော့မှာလား??? လက်ရှ်ိကျောင်းသား၄၀၀ခန့်ရှိပြီး ၈၀%မှာမွတ်စလင်ကျောင်းသားများဖြစ်ကြပြီး သိမ်ငယ်စွာတည်ရှိနေတဲ့ဘုရားခန်း မင်းတုန်းမင်းကြီးတမလွန်ဘဝကကြည့်နေမယ်ဆိုရင် ထပ်သေလို့(နတ်ရွာစံ)လို့ရနိုင်တဲ့မြင်ကွင်းရင်ထဲမကောင်းဘူး။ပဒေသရာဇ်အရိပ်အငွေ့တွေတရံရောအခါက ခမ်းနားမှု့တွေမြင်တွေ့နေရသေးပေမဲ့ အခုတော့ခွေးတောင်တံခါးမရှ်ိဓါးမရှ်ိဝင်ထွက်သွားလာလို့ရနေတဲ့မြင်ကွင်းရင်ထဲမခ်ျိဘူးရယ်။နှစ်ပေါင်း၁၀၀ကျော်သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေးဟောင်းရဲ့လက်အောက်ရောက်ရှိနေပြီလို့ထင်ရပေမဲ့မည်သည့်ပြင်ဆင်မှု့ထိန်းသိမ်မှု့မှမတွေ့ရဘူး သီးပေါဘုရင်းမျိုးနွယ်လက်ကျန်တွေအများကြီးရှ်ိနေသေးတယ်လို့သိရပေမယ့် မည်သည့်ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းမှု့မှထူးထူးခြားခြားမတွေ့ရဘူး။ရာဇဝင်ထဲမှာဘဲထားခဲ့ကြတော့မှာလား????ကျုပ်လင်းပင်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်အသုံးမကျလ်ို့သူများနောက်ပါသွားတဲ့ ငမောက် ကိုမရနိုင်မှန်းသိရက်နဲ့သွားတောင်းနေမဲ့အစား လက်ကျန်အမွေအနှစ်ကလေးတွေကိုဘဲထိန်းသိမ်းဘို့ကြိုးစားမိမှာအမှန်ပါ။တည်နေရာ။ […]
ကရင်ပြည်နယ်မြိုင်ကြီးငူစစ်ရှောင်စခန်းရှိ ယာယီစာသင်ကျောင်းတွင်အမိုးအကာမလုံလောက်၍ ကူညီထောက်ပံ့မှုလိုအပ်
By Shwe Yoe SYPosted on June 14, 2019
Zawgyicodeဖြင့်ဖတ်ရန် ကရင်ပြည်နယ် မြိုင်ကြီးငူဒေသ အေးလင်းသာယာစစ်ရှောင်စခန်းရှိ ယာယီစာသင်ကျောင်းမှာ ကျောင်းစဖွင့်ရက်မှစ၍ မိုးရွာသွန်းခြင်းကြောင့် စာသင်ရာနေရာထိုင်ခင်းနှင့်အမိုးအကာမလုံလောက်မှုများ ကြုံ တွေ့နေရကြောင်း စစ်ဘေးရှောင်စခန်းရိက္ခာနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ တာဝန်ခံ ဦးစောထွန်းက ပြောကြားသည်။အဆိုပါဒေသရှိ စစ်ဘေးရှောင် ၄၀၀၀ကျော်နေထိုင်သော အမှတ် ၂ စစ်ရှောင်စခန်းဝန်းကျင်နှင့် ယာယီစာသင်ဆောင်များသည် […]
ရန်ကုန်မိုးပျံအမြန်လမ်းစီမံကိန်း တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီ အောက်တိုဘာတွင် အပြီးသတ်ရွေးချယ်ပါမည်
ရန်ကုန်မိုးပျံအမြန်လမ်း စီမံကိန်း အပိုင်း(၁) အတွက် တင် ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီကို အောက်တိုဘာလအတွင်း အပြီး သတ်ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကြည် ဇော်မြင့်က ပြောကြားသည်။ ‘‘အခု One on One တွေ့ဆုံ […]
ကျိုင်းတုံတွင် လေပြင်းကြောင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထကျောင်းပြိုကျပြီ ပညာသင်ကြားရေးအခက်တွေ့နေ
ကျိုင်းတုံမြို့နယ်တွင်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် ပျက်စီးမှုများအတွင်း ယခုနှစ်၌ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော ကိုယ်ထူကိုယ် ကျောင်းတစ်ကျောင်း ပြိုကျ၍ စာ သင်ကြားရေးအခက်တွေ့နေပြီး ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ရေး အကူအညီပေးရန် ယင်းကျောင်း မှ ကျောင်းဆရာမတစ်ဦးက မေတ္တာရပ်ခံသည်။ ကျိုင်းတုံမြို့နှင့် မိုင်ငါးဆယ် ခန့်ဝေးကွာပြီး ပအိုဝ်းတိုင်းရင်း သားများနေထိုင်သည့် […]
မန္တလေးအမှတ်၃နယ်မြေရဲစခန်းမှရဲအချို့ကို အာမခံရဖို့ငွေတောင်းတဲ့အတွက်အဂတိမှုနဲ့ အရေးယူပြီ
Zawgyicodeဖြင့်ဖတ်ရန် မန္တလေးအမှတ်၃နယ်မြေရဲစခန်းမှရဲအချို့ကို အာမခံရဖို့ငွေတောင်းတဲ့အတွက်အဂတိမှုနဲ့ အရေးယူပြီ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ အမှတ်(၃)နယ်မြေရဲစခန်းမှရဲမှူးသိန်းနိုင် (ယခု ဒုတိယခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဥတ္တရခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး)၊ ရဲအုပ် ကျော်သူ(ယခု ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား လုံခြုံရေး ရဲတပ်ဖွဲ့)၊ ဒုတိယရဲအုပ် ထွန်းထွန်းလင်း တို့အပေါ် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေဖြင့် […]
ပေါင်မြို့ ဇင်းကျိုက်ရေတံခွန်တွင် ရေနစ်သေဆုံးမှုဖြစ်ပွား
ပေါင်မြို့ ဇင်းကျိုက်ရေတံခွန်တွင် ရေနစ်သေဆုံးမှုဖြစ်ပွား 14.6.2019 ယနေ့ မွန်ပြည်နယ် ပေါင်မြို့ ဇင်းကျိုက်​ရေတံခွန်​တွင် ရေဆင်းကူး နေရင်း လူငယ်တစ်ဦး ​ရေကူးကန်​ ရေထွက်​​ပေါက်​မှာ ​ခြေ​ထောက်​ဝင်​ပြီး နစ်နေသဖြင့် ဝိုင်းဆွဲတင်ကြသော်လည်း ရေဆွဲအားကြောင့် တော်ရုံ ဆွဲမရနိုင်ဖြစ်ပြီး ​ရေနစ်​​မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု […]
ဈေးကိုမကြာခနမသွားနိုင်တဲ့အခါ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေလတ်ဆတ်ပြီး ကြာရှည်ခံအောင်ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းမလဲ
Zawgyicode ဈေးကိုမကြာခနမသွားနိုင်တဲ့အခါ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေလတ်ဆတ်ပြီး ကြာရှည်ခံအောင်ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းမလဲ ဈေးမကြာခဏ မသွားနိုင်တာကြောင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ တပတ်စာခန့် ကြိုတင် ဝယ်ယူတတ်တဲ့ အိမ်ရှင်မတွေအတွက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ လတ်ဆတ်ပြီး ကြာရှည်ခံအောင်ထားဖို့ နည်းလမ်းကောင်းတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အိမ်ရှင်မတိုင်းအတွက် အသုံးဝင်စေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းတချို့ကို […]
ကနဦးသတင်း တရုတ်မှာ မိုးသည်းထန်စွာရွာလို့ လူ ၆၁ ထက်မနည်းသေခဲ့ပြီး လူပေါင်း သုံးသိန်းကျော် နေရာပြောင်းခဲ့ရပြီ
တရုတ်နိုင်ငံတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းကာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့် ၆၁ ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီး လူပေါင်း ၃၅၀၀၀၀ ခန့်ကို ဘေးကင်းရာသို့ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရ တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းနှင့်အလယ်ပိုင်းဒေသများတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းကာ ရေကြီးရေလျှံဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ၆၁ ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီး လူပေါင်း ၃၅၀၀၀၀ ခန့်ကို ဘေးကင်းရာသို့ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုရေးရာဝန်ကြီးဌာနက နေအိမ်ပေါင်း […]
ကြိုတင်အသိပေးထားခြင်းမရှိဘဲService Charges ကောက်ခံသောဆိုင်များကိုမကျေနပ်လျှင်တိုင်ကြားနိုင်
Zawgyicodeဖြင့်ဖတ်ရန် ကြိုတင်အသိပေးထားခြင်းမရှိဘဲService Charges ကောက်ခံသောဆိုင်များကိုမကျေနပ်လျှင်တိုင်ကြားနိုင် စားသုံးသူများကို ကြိုတင် အသိပေးထားခြင်း မရှိဘဲ ဆိုင်၏ ဝန်ဆောင်မှု အတွက် ကောက်ခံသော ဝန်ဆောင်ခ (Service Charges) ပေးရခြင်းကို ကျေနပ်မှု မရှိပါက တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ယင်းသို့ […]